Fonera Kutevera Inotendera Makambani Kuwedzeredza Analytics
Wednesday, May 23, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tsvagiridzo neGoogle inoratidza izvozvo 80% yevatengi vanoshanyira webhusaiti zvisinei nekuti vanobva kucomputer, smart phone kana piritsi, vangadaro sarudza kufona pane email kana fomu repamhepo senzira inotevera yekuita. Saizvozvo, 65% yevanoshandisa smartphone vanowana internet zuva nezuva uye 94% yavo vanozviita kuti vatsvage chigadzirwa kana sevhisi, asi chete 28% inopedzisira yaenda kunotenga kuburikidza nemidziyo imwechete.
Izvi zvinorevei kune vatengesi ndezvekuti ivo analytics dhata haina kukwana uye zvinotungamira zvinogona kuve zvinofungidzirwa kune yekumakisheni chiitiko pane iko kudyara mukushambadzira kwepamhepo kwavari kugadzira. Mhinduro yekuwedzera kudzoka padhora rekushambadzira inogona kunge iri mukufona-kuteedzera iyo inobvumidza iwe kunongedza nzira chaiyo yedhijitari inotorwa nevatengi kuti vasvike panzvimbo yavo yekutengesa.
Pane nzira dzinoverengeka dzekushandisa kufona kunoteedzera. Imwe nzira yakapusa ndeye chinja iyo foni nhamba zvichibva pane zvinoreva sosi yeiyo peji. Isu takatumira script yatakagadzira kuti tiite izvi. Kutanga, isu tinongokurudzira vatengi kuti vawane nhamba yefoni yekutsvaga, imwe yemagariro, uye imwe yekureva nzvimbo saiti kuitira kuti vatange kuverenga huwandu hwavo. Imwe nzira ndeyekunyorera uye kusanganisa yehunyanzvi sevhisi - mazhinji acho anozonyora zviitiko muzviitiko zvako analytics kushandiswa.
Kufona-yekutevera masevhisi anounganidza ruzivo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, kusanganisira yekutsvaga injini yekushambadzira, mishandirapamwe yeAdWords nevamwe uye voibatanidza kune data yekufona kutsvaga nzira iyo ingangoitwa nemutengi. Izvi zvinopa hupfumi hwemashoko pamusoro pehuwandu hwevatengi, kusanganisira mawaniro avakaita nezve chigadzirwa kana bhizinesi. Neruzivo rwakadai, kushambadzira kwakanangwa, izvo zvinobvumidza kuwedzera kudzoka kwedhora roga roga rakaiswa mukushambadzira, inova chimedu chekeke.
DialogTech iri rimwe rebasa rakadaro, rine kusanganiswa kwe Hubspot, Google Analytics, uye mamwe mapuratifomu. Ivo vane API yakasimba. Vamwe vatambi mumusika vari Masamanisi, Century Inopindirana uye LogMyCalls.
Kana tarisiro ikadaidza bhizinesi, iyo yekufona-yekuteedzera sevhisi inosanganisa iyo iripo data kuti uone kana iye ari kufona akafona mushure mekuona yakabhadharwa yedhijitari kushambadzira, ye organic yekutsvaga injini yekunyorwa, kana kubva kuFacebook. Ivo vanotora ongororo pasi kusvika padiki padiki padanho rehuwandu, kusanganisira iwo chaiwo mazwi akakopwa muinjini yekutsvaga, iyo nguva iyo muridzi aiona kushambadzira, kunyangwe iko kufona kwacho kwaive kubva kune landline kana nhare, zvichingodaro. Iyo data inotomboendeswa kune Analytics mune dzimwe nguva. Iyo dhata inopa mufananidzo wakajeka wekubudirira kwega rega rekushambadzira dhora rakadyarwa, uye rinokutendera iwe kuti uongorore zvakanaka ako ekushambadzira mabhajeti uye zano maererano.
Tags: Analyticskufona kwekuteveradialogtechifbyphonefonifoni nhambawemakemirechii chinonzi kufona
May 23, 2012 pa 6: 21 PM
Ichi chidimbu cheNice uye chinomanikidza nharo yekutevera nhare. KuCentury Interactive, tinobvumirana 🙂
Kazhinji, vatengesi havasi kuwana chikwereti chavanokodzera. Iyo hurukuro pakati pevatengesi nevatengi dzimwe nguva inonzwika seiyi:
Mutengi: “Saka wakandirovera mabhatani makumi maviri kuburikidza neAdWords nezuro asi ndinoziva ini foni yangu haina kurira uye handina kana bhizinesi. Nei ndiri kukubhadharazve? ”
Marketer: “Mira mirira mira! Ndoziva wagamuchira inotonhora inotungamira kubva kune iyo yekudzvanya! Rudyi? Ndinovimba?"
Ko kana mushambadzi aigona kuti:
“Ndakuendesa mabhatani makumi maviri uye abva mune aya mana mazwi. 20 yeaya mabhatani akatungamira kufona uye 4 acho aive makuru kutengesa! Usanditenda? Ngatiteererei nhare dzakarekodhwa pamwe chete, ndinokuratidzai zvandiri kureva. ”
Kufona kwese kunotaurira nyaya inokodzera kutaurwa.
May 24, 2012 pa 12: 03 PM
Yakakura blog nezve Kufona kuteedzera uye inotove nezvakawanda mabhenefiti.
Heino runyorwa rwezvakanaka zvandakaisa munguva pfupi yapfuura izvo zvinogona kubatsira chero munhu kuverenga izvi kuti azive kukosha kwekutevera kuteedzera kune chero mushambadzi kuyera kwavo uye kwekunze mishandirapamwe.
Edza mishandirapamwe yako yekutengesa kubva pakudzvanya kufona - uchiziva kuti pane chinoshaikwa chinongedzo kana uchingoyera webhusaiti kushanya
Vashanyi nzira dzinoonekwa kuburikidza newebhusaiti inoratidza chaiyo nzvimbo yekufona
Nhamba yakasarudzika yemumwe neumwe mushanyi
Tevera risingagumi mazwi akakosha
uchienzanisa mafoni ako maringe nekutengesa kwako kuti uone mazwi akakosha ayo anonyatso kugadzira kutengesa
Kubatanidza kweGoogle ™ kunopa kugona kubatanidza data rekufona muGoogle Analytics ™ kuitira kuti mabhatani akwanise kufananidzwa nemavhoriyamu ekufona.
Hapana Hardware yekumisikidza, ingo svikira iyo gore based based system system 24/7 kuburikidza neinternet login.
May 25, 2012 pa 4: 46 PM
Hongu, kufona kwekutevera kunoratidzika kunge kwakakodzera. Iko kudyara mukushambadzira kwepamhepo kuchiri kukosha sezvo iri iyo investa iyo inogadzira kutungamira munzvimbo yekutanga.